पहाडी गाउँका कुनाकन्दरादेखि शहरसम्म डिसहोम लोकप्रिय
बुधवार, चैत्र ६, २०७५ १२:५३:३१
यसरी बन्द हुँदैछ एनालग टिभी प्रदेश १ मा
सन् २०२० सम्ममा सबैका घर घरमा डिसहोम
उदयपुर । रौतामाई गाँउपालिका १ नामेटारका राम बहादुर मगर अहिले घरमै बसेर टेलिभिजन हेर्न थालेका छन् । उमेरले ६३ पुगेका मगरका ३ भाई छोरा दुवईमा रोजगारीका लािग गएका छन् ।
‘मैले ४० वर्ष अघि भारतको मुम्बाईमा देखेको टेलिभिजन अहिले घरमै हेर्न पाएको छ,’ खुुशी व्यक्त गर्दै सेतै फुलेका मगरले भने, ‘छोराहरु विदेश गएपछि पठाई दिएको पैसाले डिसहोम किनेर घरमै टिभी हेर्न थालेको छु, मैले सोचेको पनि थिईन भन्दै मगरले भने, ‘नामेटार जस्तो दुर्गम भेगमा टेलिभिजन हेर्न पाइन्छ भनेर ।
टि.भि नै हेर्नको लागि कटारी र गाईघाट धाएको तितो सत्य बताउँदै मगरले भने, ‘हामीले समाचार रेडियोमा सुन्ने गरेका थियौ, अहिले डिस होमले घरमै टिभी देखाउँछ ।
यता वेलका नगरपालिका मैनामैनीका दिल बहादुर दर्जीले पनि १५ दिन अघि घरमा डिसहोम जोडे । छोराले मसेसियाबाट पठाई दिएको एलइडी टिभीको सदुपयोग गर्नको लागि दर्जीले ४० वाटको सोलार जडान गरी डिस होम जोडेको बताउँछन ।’
माथि दर्जी र मगरको उदाहरण मात्र हुन् । रेडियो सुन्ने पारखी स्रोतालाई अहिले ग्रामिण क्षेत्रमा टेलिभिजनको लत बढ्दै गएको छ । ग्रमिण क्षेत्रमा पनि होईन, शहरी क्षेत्रमा पनि डिस होम लोकप्रिय छ ।
एनालग टिभी भटाभट बन्द हुन थालेपछि डिसहोम जोड्ने संख्या एका एक बढ्दै गएका छन् । ‘गएको जेठ महिनामा उदयपुरको गाईघाट क्षेत्रमा एनालग टिभीमा व्यापार गर्ने सिद्धिविनायक डिस नेटवर्कले सेटपबक्स जडान गर्न थाल्यो ।
सिद्धिविनायक नेटवर्क काट्दै सेटफबक्स जडान गर्न थालेपछि सर्वसाधरणहरु पनि सेटफबक्स जडान गर्नुको साटो डिसहोम जडान गर्न थाले छ । ‘एनालग टिभी बन्द गरेर सेटअपबक्स जडान गर्नुपर्छ भने,’ स्थानीय मुना दाहालले भनिन्, ‘त्यसो गर्नुको साटो डिसहोम जडान गर्दा फाइदा देखेर डिसहोम जडान गरे ।’
एक नम्वर प्रदेशमा एका एक एनालग टिभी बन्द हुन थालेपछि डिसहोम जडान गर्ने उदयपुर गाईघाट की मुना दाहाल मात्र होईन । नेपालको एकमात्र डाइरेक्ट टु होम टीभी सेवा प्रदायक डीस होमले सर्वसाधारणलाई मन तानेको अहिले देखिन्छ ।
डिसहोम सेवा सञ्चालन गरिरहेको डिस मिडिया नेटवर्क सोही प्रयोजनका लागि प्राइभेट लिमिटेडबाट पब्लिक लिमिटेड कम्पनी डाइरेक्ट टु होम (डीटीएच) प्रणाली मार्फत् सेटलाइट माध्यमबाट टेलिभिजन च्यानल सेवा प्रदान गर्न थालेपछि सवैको लोकप्रिय बन्दै गएको छ ।
प्रदेश १ मा एनालग टेलिभिजन सबै बन्द भएपछि डिसहोमको माग बढ्यो
एक नम्वर प्रदेशको पूर्वी नेपालमा हालसम्म एनालग प्रणालीमा सञ्चालन हुँदै आएका सबै टेलिभिजनहरु बन्द गरिएका छन् । एनालग टेलिभिजनहरु बन्द भएपछि डिशहोमको माग ह्वात्तै बढेको डिसहोम विक्रेता केन्द्रहरुको दावी छ ।
उदयपुरको गाईघाट डिसहोम विक्रेता केन्द्रमा प्रविधिकका रुपमा कार्यरत अर्जुन खड्काले डिसहामको माग बढेको बताए । ‘गाईघाट कटारी क्षेत्रमा धेरै विक्रेता केन्द्रहरु छन्,’ उनले भने, ‘एनालग टिभी सरकारले बन्द गरेपछि डिसहोम जडान भ्याई नभ्याई भएको छ।’
स्रोतका अनुसार एक नम्वर प्रदेशमा पर्ने मोरङ, झापा, सुनसरी, तेह्रथुम, उदयपुर, धनकुटा, इलाम, खोटाङ, ओखलढुँगा, पाँचथर, सोलुखम्बु, ताप्लेजुङ, भोजपुर लगायतका क्षेत्रमा एनालग टिभी बन्द भएपछि डिसहोमको माग बढेको छ ।
यसरी बन्द हुँदैछ, एनालग टिभी प्रदेश १ मा
सञ्चार मन्त्रालयका इञ्जिनियर अनिल भुजेलको नेतृत्वमा साउनको पहिलो हप्ता अनुगमन टोलीले प्रदेश १ को विराटनगर, इटहरीमा छडके अनुगमन गरेको थियो । एनालग सिष्टममा सञ्चालित केवल नेटवर्कहरुमा छापा मारी बन्द गराएको थियो ।
सोही क्रममा इटहरीमा रहेको पशुपति केवल नेटवर्क र सुनसरी केवल नेटवर्कमा सो टोलीले छडके अनुगमन गरी बन्द गरेको जानकारी दिएको हो ।
पटक पटक डिजिटल प्रविधिमा जान अनुरोध गर्दा पनि नटेरेपछि टोलीले अनुगमन गरी बन्द गर्न मन्त्रालयको टोलीले ताकेका गरेको छ ।
सञ्चार मन्त्रालयले गत २०७५ बैशाख १५ गतेदेखि नै सम्बन्धित केवलहरूलाई पत्राचार गरी तत्काल एनालग सिस्टम बन्द गरी सेटअपबक्स प्रणालीमा जान आग्रह गरेको थियो ।
एनालग बन्द भएपछि अब च्यानल हेर्न अनिवार्य सेटअप बक्स खरीद गरिनुपर्ने र एनालग सिष्टम बन्द गरेपछि प्रदेश १ मा रहेका एनालग सिष्टमका सबै टेलिभिजन बन्द भएका छन् ।
केवल व्यवसायीहरु एनालग सिस्टम बन्द गर्न मान्दैन्न्
सरकारले धेरै पटक एनालग टिभीहरु बन्द गर्न भने पनि अटेर गरिएपछि मन्त्रालयले छापा मार्न थालेको छ । तर, पनि एनालग व्यवसायीहरुले अटेरी गरेकाले सर्वसाधारण मारमा परेका छन् ।
मन्त्रालयले देशभरका अन्य जिल्लाहरुमा पनि छापा मार्ने र एनालग टिभी बन्द गराउने कार्यलाई तीब्रता दिएको छ । जसले गर्दा एनालग बन्द हुन सकेको छैन । तर, पनि उपभोक्ताहरुको ध्यान डिसहोमतर्फ जान थालेको छ ।
दुई वर्षपछि सबै नेपालीले डिसहोम मार्फत टेलिभिजन हेर्न पाउनेछन् । डिसहोम व्यवस्थापनले अबको २ वर्षमा सबै नेपालीको घर घरमा डिसहोम पुर्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
जिओग्राफी मार्फत प्रत्येक नेपालीको घरमा पुग्न सक्ने क्षमता भएको कारण लक्ष्यअनुसार काम हुने डिसहोम सञ्चालकको भनाई छ।
यो क्षमता डिसहोममा मात्रै भएको कारण लक्ष्यअनुसार काम हुनेमा सञ्चालक विश्वस्त छन् । बजारमा आएका अरू च्यानल सञ्चालक कम्पनीभन्दा डिसहोमले आफ्नो मजबुत संयन्त्र भएको बताउँदै आएको छ ।
नेपालमा डिसहोम च्यानल सञ्चालनमा आएको ८ वर्ष भयो । शुरुवाती वर्षमा डिसहोम ६० वटा च्यानलबाट शुरु गरिएको थियो । अहिले १ सय ५० भन्दा धेरै च्यानल डिसहोममा जोडिएका छन् ।
नेपालमा १२ लाख परिवारले डिसहोमको डिजिटल सिग्नल मार्फत नेपाली च्यानल हेर्दै आइरहेका छन् । डिसहोम शुरुवातको समयमा नै नेपालमा डिजिटल प्रविधिको च्यानल हुनुपर्छ भन्ने सोचाईका व्यक्तिहरू नै निकै कम थिए । तर परिवर्तनशील समयसँगै अहिले नेपालीको माग पनि बढेको छ ।
विश्व बजारका धेरै कुराहरूमा नेपालीको सोच मिल्ने भएको हुँदा बिस्तारै डिसहोम प्रयोगकर्ताको माग बढ्दै गएको छ । विशेषत ः शुरुवातको समयमा नेपालको मुख्य–मुख्य सहरहरूमा डिसहोमको डिलर राखिएका थिए । यस कारण पनि डिसहोम प्रयोग गर्नेमा सहरका व्यक्तिहरू नै बढी थिए ।
अहिले नेपालभर डिसहोमको ८० जना डिलर, ३५ सयदेखि ४ हजारको हाराहारीमा सब डिलर र प्वाइन्ट गरेर नेपाल भर १२ देखि १३ हजारको सङ्ख्याबाट डिसहोमको सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको छ ।
डिसहोमको सिमटिभीको पर्खाइमा उपभोक्ता
केही दिन अघि डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेड र सिम्पल मिडिया नेटवर्क प्रा.लि. को संचालक समितिको संयुक्त वैठकले सिम टि.भि. डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेडले खरिद गर्ने सम्झौता सम्पन्न भएको छ ।
खरिद सम्झौता अनुसारको शेयर खरिद निकट भविष्यमै सम्पन्न हुनेछ । यसका साथै सिम टि.भिको व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेडले लिएको छ ।
सन् २००९ मा स्थापना भएको डिश मिडिया नेटवर्क लिमिटेड नेपालमा काम गरिरहेको सबैभन्दा सफल र ठूलो कम्पनी हो ।
असार १८, २०७४ बाट यो कम्पनी पब्लिक कम्पनीको रुपमा रुपान्तरण भइसकेको छ र निकट भविष्यमा नै सर्वसाधारणका लागि शेयर समेत निष्काशन गर्ने तयारीमा रहेको छ ।
त्यस्तैगरी सिम टि.भि. नेपालका मल्टि सर्भिस अपरेटरको रुपमा बजार विस्तार गरिरहेको अग्रणी संस्थाको रुपमा गनिन्छ।
सिम टिभिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्याकी शाहले डिश मिडिया नेटवर्कले सिम टि.भि.को खरिद पछि टि.भि. हेराईको गुणस्तरिय अनुभव अझ धेरै ग्राहकहरु तथा यसमा आवद्ध लोकल केवल अपरेटरहरुको पहँुचमा पुग्ने जनाएका छन् ।
नयाँ प्रविधिको प्रयोगसँगै आक्रामक बजार विस्तार, पूर्ण डिजिटलाइजेशनमा र चुस्त व्यवस्थापनमा अझ जोड दिएर ग्राहकहरुलाई गुणस्तरिय सेवा प्रदान गर्ने डिश मिडिया नेटवर्कले जनाएको छ ।
प्रकाशित मिति: शुक्रवार, श्रावण २५, २०७५, ०८:०८:००
मकवानपुर केन्द्रबिन्दु भएर भूकम्पको धक्का
दिउँसोपख पश्चिमी भू-भागमा पानी पर्ने
मन्दिर परिसरभित्र वर्ल्ड लिंकको फ्री वाईफाई सेवा
शुक्रवार, फाल्गुन १०, २०७५ न्यूजमिसाइल
आइतवार, फाल्गुन ५, २०७५ न्यूजमिसाइल